नेका नेताहरूको झगडाः ...लाई भन्दा देख्नेलाई लाज - Online Majdoor
नेका नेताहरूको झगडाः …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज
शुक्रबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका दुई जना नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच मञ्चमै भनाभन भएको श्रव्यदृश्यको खुब प्रचार भयो । सयौँ मानिससामु नेताहरूले देखाएको यस्तो चर्तिकला देख्दा उद्देक लाग्यो । त्यसो त म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य वा कार्यकर्ता होइन । तथापि, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका पार्टीका नेताहरूको यस्तो छुचो र असभ्य व्यवहार देखेर ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ को अनुभव भयो । नेताहरूको यस्तो व्यवहारले कार्यकर्ता र समर्थकबीच कस्तो प्रभाव पार्ला ¤
राजनीतिक दलभित्र वैचारिक र नीतिगत मतभेद हुनु अनौठो कुरा होइन । त्यस्ता मतभेदबारे बहस र छलफल पनि हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि सैद्धान्तिक र दार्शनिक विचारधारामा उभिएको दलभित्र पनि त्यस्ता बहस र छलफल गर्ने आफ्नै शैली र पद्धति हुन्छन् । तर, मञ्चमै तँ–तँ र म–म गर्नु शोभनीय कुरा होइन । भोलि गएर देशको ‘प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने’ नेताहरूका यस्ता व्यवहारले कार्यकर्तालाई त नमीठो प्रभाव पार्छ नै, सर्वसाधारणलाई समेत गलत प्रभाव पार्नेछ ।
वैचारिक मतभेदलाई व्यक्तिगत इविको रूपमा लिनु सङ्कीर्णता हो । मानिस विचारवान प्राणी हो । तर, सबैको विचार सधैँ सही नै हुन्छ भन्ने होइन । गलत विचार सच्याउन नै मानिस–मानिसबीच वैचारिक बहस हुने गर्छ । त्यस्तो वैचारिक बहसलाई व्यक्तिगतरूपमा लिएर रिसइवी साँध्ने गल्ती कसैबाट पनि हुनुहुन्न ।
झन्डै आठ दशक लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक भनिएको दलभित्रको अवस्था यस्तो छ । यति लामो अवधिमा त्यो दलले के कुरा सिक्यो ? कुन पद्धति बसाल्यो ? आज यस्तो चाला छ भने भोलि कस्तो चाला होला ? के राजनीतिक दल भनेको भाँडभैलो हो ? भावी नेतृत्वले अहिलेको नेतृत्वको यस्तो व्यवहारबाट के सिक्ने ? कि अहिलेका नेताहरूको प्रशिक्षणमै कमजोरी पो छ कि ?
राजनीति गर्नुलाई सरकारमा जानु, प्रधानमन्त्री बन्नु र अकुत सम्पत्ति कमाउनु भन्ने अर्थमात्र बुझेका काङ्ग्रेसका नेताहरूले सत्ता सुखको लागि सार्वजनिकरूपमै नग्न व्यवहार गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
कोरोना पीडितहरूको स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ
सक्वको म राजदास – ७९/ सोभियत सङ्घपछि रुसी जनताको बेहाल
रणबहादुरका नयाँ संस्करण : आजका शासकहरू
सत्ता स्वार्थ र नेताहरूको मति भ्रष्ट
यसपालिको औँसीमा फोनबाट शुभकामना दिने हो कि ?